सरकारले लिखित पत्र नदिए, फेरि आज बाट अनसन बस्ने डा गोबिन्द केसी
असोज ३ काठमाडौ,शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. केसीले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई असोज २ गते सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । माग पुरा नभएको भन्दै , उनी आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत नवौं आमरण अनसन सुरु गर्ने तयारीमा छन् ।
सरकारले भने डा. केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराउने र अनसन रोक्ने प्रयास थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण अघि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको बैठक राखेर डा. केसीको माग सम्बोधनका लागि चारबुँदे निर्णय गराएका थिए । त्यसअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन सदनमा पेश भइसकेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनमोहन अस्पताल खरिदसम्वन्धी प्रक्रिया थालेको छ ।
तर, डा. केसीले भने सरकारको निर्णय लिखित रुपमा नआएको भन्दै कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । łमौखिक रुपमा मैले पनि सुनेको र पढेको हो । तर, मलाई कुनै लिखित जानकारी आएको छैन,’ डा. केसीले भने, हेरौं साँझसम्म के हुन्छ । त्यसपछि म आफ्नो कुरा भन्छु ।’
डा. केसीले लिखित प्रतिवद्धता खोजेपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाटै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डससँग छलफल भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
लिखित पत्र आएमा डा. केसी अनसन स्थगित गर्न सहमत हुनसक्ने उनका सहयोगीहरुले बताएको अनलाइन खबरमा समाचार छ ।
रियल मड्रिडले स्पानियोलाई हरायो
दाङ्गमा एक वृद्धको मृत्यु